Google na-egbu oge mmalite nke Pixel 4a na July 13 | Gam akporosis
Pixel 4a na-egbu oge ugbu a maka ịhapụ na July 13
O yiri ka Google na-enyocha ahịa iji malite Pixel 4a n'oge kwesịrị ekwesị. Ugbu a anyị maara na ọnwa mmalite ka gbanwere site na June ruo July, kpọmkwem na 13th.
Nke a bụ n'ihi ọnọdụ ahịa nke ọrụ ọkachamara emebiwo nke ọma n'ihi COVID-19. N'ihi ya, ọ na-ghọtara na ọ bụghị oge kacha mma ẹkedori a mobile; Lelee ihe mere nnukwu Galaxy S20 Ultra mgbe ọ nwere anyị niile ịmalite ịmịnye ndị a n'akụkụ ndị a.
Jon Prosser na akaụntụ Twitter ya emewo ka o doo anya na Pixel 4a dị njikere ịmalite, mana ọ bụ nnukwu G na-egbochi azụ ịmalite maka ihe karịrị ezi uche. Ọ ga-abụ maka ọnwa Julaị, na 13th, mwepụta nke Pixel 4a mgbe n’izu ụka gara aga a mara ọkwa na ọ ga-abụ n’ọnwa Juun.
Bụ mbido May, mgbe ahụ, ọkọdọdụk June, ugbu a, kpaliri ọzọ.
"Naanị nwa" & "Agba na-acha anụnụ anụnụ"
Atụmatụ maka ọkwa dị ugbu a:
BTW - naanị 4G.
(Ewela iwe igbu asịrị 5G)
Ọ dị ka ha dị njikere ụgbọ mmiri. Mkpebi a kachasị dabere na nyocha ahịa.
- Jon Prosser (@jon_prosser) Nwere ike 21, 2020
The tweet na ajụjụ nwekwara na-ekwu na ọ ga-abụ ụdị 4G ọ ga-enwekwa agba abụọ: ọcha ojii na anụnụ anụnụ. Ekwentị na-eche ọtụtụ oge maka ịdị mma ya na foto; N'agbanyeghị ọgụgụ isi n'azụ HDR na Portrait Mode apụla na nso nso a ụlọ ọrụ.
Bụrụ na ọ bụ ezie na ọ nwere ike, ọ dị ka O doro anya na ọ na-egbu oge ịmalite ngwaọrụ n'ọnọdụ nke anyị hụrụ onwe anyị na ya. Nyocha ahịa nke ụmụ okorobịa si na Google mere ga-abụrịrị nke ọma na nke a ma anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ na July 13 mgbe Pixel 4a hụrụ ìhè ahụ.
Karịsịa ihe niile anyị na-ekwu ya n'ihi ohere nke a rebound n'ihi COVID-19 nakwa na Google nọkwa n'ọnọdụ ọzọ mwepụta nke ọnụ gị. Nke a nwekwara ike ime na ngwaọrụ ndị ọzọ dị mkpa dịka Apple ma ọ bụ Samsung n'onwe ya na Nkọwa 20.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Pixel 4a na-egbu oge ugbu a maka ịhapụ na July 13
Google Interland: Egwuregwu maka ụmụaka ịmụ banyere cybersecurity
Ekwupụtabeghị Exynos 880 ọzọ ka ọ bụrụ chipset nke Vivo Y70s 5G ga-eji